Shuntuki nnukwu tomato. Nkọwa nke oke dị iche iche: mkpụrụ osisi tomato (foto) - Tomato iche - 2020
Otu esi akụ na-eto tomato "Shuntuk ibu"
Ugbu a, ọnụ ọgụgụ zuru oke nke tomato dị iche iche na mkpụrụ osisi buru ibu. Ma, ọbụna n'etiti nnukwu tomato dị iche iche.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ihe ubi nke sitere na mkpụrụ osisi 1 ị nwere ike ịme salad maka ezinụlọ buru ibu, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ụdị dị iche iche "Shuntuk ibu".
Mkpụrụ mkpụrụ na mkpụrụ
Nhọrọ nke seedlings
Ọnọdụ na-eto eto
Mkpụrụ nkwadebe na akuku
Nlekọta na nlekọta
Ọrịa na igbochi ọrịa
Owuwe ihe ubi na nchekwa
Dị ka aha ahụ na-egosi, mkpụrụ osisi ahụ dị oke oke site na nnukwu ibu ha. Okwesiri ibu na-eto eto na greenhouses, na maka oghere nke ozo, choro ogwu. N'ebe ndịda nke Russia na mpaghara dum nke Ukraine, ọ na-etolite n'ụzọ zuru ezu na ala oghe. Ma na mpaghara ndị ọzọ nke Russian Federation na Belarus, osisi ga-adị mma na griin haus, ọ bụ ezie na ọ ga-eweta owuwe ihe ubi n'èzí.
Na-achọ ka indeterminantnyh iche, ohia nwere ike na-eto site na ihe karịrị 2 mita. Ugbo siri ike, dị ike, ka ọ ghara ịmalite, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmepụta otu ogwe n'aka ha. N'ime otu mkpụrụ ovaries 4-6, ovaries na-etolite, ma ka tomato wee too dị ka o kwere mee, a ghaghị ahapụ abụọ ovaries n'otu aka.
Ọ dị mkpa! "Shuntuk ibu" abụghị ngwakọ, ma tomato dị iche iche. Nke a pụtara na mkpụrụ nke mkpụrụ osisi ị tozuru etozu na-echekwa ihe ndị e ketara eketa, nke pụtara na ha dị mma maka ịkụ ihe.
Mkpụrụ anụ ahụ na-acha uhie uhie, o nwere ruo iri ụlọ iri. Ụdị mkpụrụ osisi ahụ dị gburugburu, na-agbada elu na n'okpuru. Ndabere na mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi na-adịghị na tomato. Gburugburu osisi ahụ, ruo mgbe tomato chara acha, enwere ntụpọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Otu n'ime uru nke ụdị dị iche iche bụ ihe ndị a:
ezi elu mkpụrụ;
anụ ahụ dị mma;
ezigbo ngwaahịa na àgwà ọma;
ezigbo njem na nchekwa;
eguzogide ọgwụ na pests na ọrịa fungal.
N'ime ezughị okè (na ọbụna ndị ikwu), onye nwere ike ịlụ di ma ọ bụ nwunye na-achọ ka ọ bụrụ onye na-elekọta ya, ma eleghị anya ọ bụghị otu n'ime oge.
Ị ma? Kasị tomato, nke e depụtara na Guinness Book of Records, toro na 1986 site n'aka G. Graham si Oklahoma. Mkpụrụ ahụ nwere ihe karịrị 3.5 kg. Onye na-ede ihe ubi a na-ede ihe ubi aghọwo ome ohia, nke nwere elu karịa mita 16. Osisi a na ihe na-erughị otu afọ mụrụ nwa karịa mkpụrụ osisi 12,300.
mkpụrụ osisi dị arọ - 440-480 g, ma ọ bụrụ na ị gaghị adọpụ ihe ndị ahụ, ma ọ bụrụ na ị hapụ 2 ovaries na nkwụsịtụ, ibu nwere ike iru 750-1450 g;
mkpụrụ - 13 n'arọ / sq. m;
ntozu ntozu - etiti oge;
oge chara acha - 110-114 ụbọchị site na mbụ Ome;
nzube - jiri ya mee ihe na ntanetị;
Usoro a kwesịrị ịbịakwute ya nke ọma, inwe ngwaahịa dị mkpa nke ihe ọmụma maka nhọrọ ziri ezi nke seedlings. Nhọrọ kachasị mma bụ ịzụta seedlings sitere na ndị na-ebu ozu tụkwasịrị obi.
Ọ bụrụ na ndị enyi gị enweghị onye dị otú ahụ, ị ​​ga-aga ahịa. Enwere ihe ize ndụ na ahịa ịzụta ala ndị dị ala, ma site n'ịgbaso ụfọdụ ndụmọdụ dị mfe, ịnwere ike belata ihe ize ndụ a:
Nke mbụ, jụọ onye na-ere ya banyere seedlings ya, banyere ụdị tomato dị iche iche. Onye na-anụ ọkụ n'obi ga-amalite ozugbo ịkọrọ gị tomato, zara ajụjụ niile gị. A pụrụ ịtụkwasị ndị na-elekọta ubi ahụ obi, ha na-azụkarị ahịa, n'ihi na ha bụ isi ihe abụghị ego (ọ bụ ezie na, n'ezie, ego agaghị adị oke ma ọ bụ), mana ịmara "aka". Ndị dị otú ahụ agaghị emepụta mkpụrụ ọjọọ (ma ọ bụ ụdị dị iche iche) maka àgwà, mara ha nke ọma.
Afọ nke seedlings ekwesịghị gafere 45-50 ụbọchị. Egwu niile kwesịrị ịdị ka otu dị elu, n'ọnọdụ a, mkpụrụ osisi ga-eme n'otu oge ahụ.
Na-atụ aro ibu nke a seedling bụ 35-40 cm, e kwesịrị 9-12 mepụtara epupụta na azuokokoosisi.
Na azuokokoro na mgbọrọgwụ ekwesịghị ịbụ nchịkọta nke nkụ, stains, pigmentation.
Epupụta kwesịrị ịbụ ụdị ziri ezi, gbasie ike, enweghi ike ịchọta ya.
Ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ na-egbuke egbuke, na agba nke osisi ahụ dịgasị iche na emerald siri ike, ọ ga-abụ na a na-eji ihe ndị na-akpali akpali na-eji ọtụtụ nnukwu doses.
Mkpụrụ osisi ahụ kwesịrị ịdị na ntanetị na mkpụrụ, na mpaghara mgbọrọgwụ a ga-ehicha mkpụrụ ahụ.
Na-eto tomato kacha mma n'elu ájá na ụrọ n'ala. N'okpuru akwa na-ahọrọ ebe a na-emechi site na drafts, nke nwere ezi ọkụ ọkụ, ma ka ìhè anyanwụ ghara ịdaba na bushes.
Gụkwuo banyere akwukwo nri ihe ubi.
Maka tomato, mkpụrụ osisi dị ezigbo mkpa. Tomato na-eto nke ọma mgbe:
Nwere ike kụrụ mgbe:
Ma mgbe ihe ndị a kụrụ, tomato na-akpata mgbọrọgwụ:
ugu, ma e wezụga cucumbers;
Ntọala ntọala dị mma maka ntọala nkịtị:
ala -14 Celsius C;
ikuku n'ehihie - 23-25 ​​° C;
ikuku n'abalị - ọ bụghị ala karịa 14 Celsius.
Ọ dị mkpa! Ịgbara tomato na-achọ ihe dị ukwuu ma na-eme mgbe nile: ọ bụrụ na mmiri ozuzo dị elu, mmiri ọ bụla 4-5 ụbọchị. A naghị anabata mgbọrọgwụ nke mgbọrọgwụ, ya na ọnụ ala a na-atụ anya na okpomọkụ na mmiri, ebe a na-agbanye mgbọrọgwụ.
55-60 ụbọchị tupu kere ke oghe ala seedlings mkpa tọ nke osisi maka seedlings. Iji mara ụbọchị ịgha mkpụrụ, jiri nchịkọta ndị a:
Chọpụta site n'enyemaka nke kalenda nke onye na-elekọta ubi, mgbe oge nke ebe obibi gị, ikuku na ala na-ekpo ọkụ ruo okpomọkụ (elu: ụbọchị - 23-25 ​​Celsius; n'abalị - 14 Celsius na n'elu, ala - 14 Celsius);
site na oge kwesịrị ekwesị maka ịkụ tomato n'ime ala, ị ga-ewepu izu asatọ, ihe ga-esi na ya pụta bụ oge ịgha mkpụrụ maka mkpụrụ osisi.
Mkpụrụ tupu ịgha mkpụrụ kwesịrị ịhazi. N'ọnọdụ ahụ, ọ bụrụ na mkpụrụ osisi ahụ bụ ihe a maara nke ọma, na ị kwenyesiri ike na ọ bụ ngwaahịa mbụ sitere n'aka onye na-emepụta ya, ọ bụghị mkpa ka a ghazie ha mkpụrụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, a ghaghị ime ọgwụgwọ:
maka disinfection tinye na ngwọta nke potassium permanganate (1 g / 100 ml mmiri) maka nkeji 20;
maka otu nzube ahụ, ị ​​nwere ike ịṅụ otu ụbọchị na ngwọta nke soda soda nke otu izu ahụ;
emeso Phytosporin - ibu stimulator, dị ka e gosipụtara na ntụziaka ahụ.
Ugbu a, ịkwesịrị ịkwadebe mkpụrụ. Ọ bụrụ na ị kpebie ime ya n'onwe gị (ị nwere ike ịzụta ngwakọta dị njikere maka seedlings na ụlọ ahịa pụrụ iche), jiri ihe ndị na-esonụ:
peat - 1/3;
turf - 1/3;
ájá - 1/3.
Na-eme nke ọma, tinye ya na akpa na drainage oghere ma fatịlaịza na ngwọta:
superphosphate - 1 tbsp. ùkwù;
potassium sulfate - 2 tsp;
urea - 1 tbsp. otu ngaji.
A na-agbazi fatịlaịza a kapịrị ọnụ n'ime ịwụ mmiri 1, wụsa mkpụrụ ahụ n'ụzọ dị otú a na-ewepụ mmiri na-erufe site na oghere.
Ị ma? N'ime afọ 800 BC, ndị obodo nke Central na South America amaolarịrị tomato. Aztek nyere omenala aha "tomato", ma ọ bụ "nnukwu beri". Ndị Europe maara tomato na narị afọ nke 16, n'ihi ndị mmeri.
Ị nwere ike jikọọ na akụkụ ndị ọzọ humus, peat na sod n'ala, mix kpamkpam. Na ịwụ nke ngwakọta iji mee tablespoon nke superphosphate na 1 cup sifted osisi uyi.
A ghaghị ikpocha ala maka seedlings. A ghaghị ime nke a, n'agbanyeghị ebe anare ala - zụtara na ụlọ ahịa ma ọ bụ na-ejikọta onwe ya. N'okpuru ebe a bụ ụzọ nke ụzọ kachasị mfe na nke kachasị dị irè nke disinfection n'ụlọ n'ebe obibi:
Wunye 3-5 cm n'ime akwa oyi akwa na mpempe akwụkwọ, tinye na oven maka minit 20 na 200 Celsius.
Ghichaa ihe ngwọta nke potassium permanganate na esi mmiri.
Ngwongwo abụọ nkeji na ngwa ndakwa nri, na oke ike.
Mgbe osisi na ala dị njikere, ọ bụ oge ịgha mkpụrụ. N'ihi na-eto eto seedlings ọ kasị mma iji peat iko, ma ị nwere ike ime na plastic (500 ml), na oghere na ala maka drainage. 2 ụbọchị tupu ịgha mkpụrụ na iko na-agbanye ala, ọ kwesịrị "ịgwọ" ntakịrị. N'echi ya, ọ bụrụ na nke a dị mkpa, ala ga-eme ka mmiri ṅụọ (tupu ị kụọ osisi, ọ ga-adị ntakịrị mmiri).
Na mkpịsị aka anyị na-eme ka ịda mbà n'obi (1-1.5 cm), ebe anyị na-etinye mkpụrụ ahụ. Wụsaa ala, jiri ya na-agba chaa chaa, kpuchie ya na fim.
Anyị na-akwado ịmara nke ọma ịzụ nri tomato.
Ruo mgbe Ome ahụ pụtara, isi ihe ndị a ga-achịkwa bụ okpomọkụ, ọ ga-adị n'agbata 23-25 ​​Celsius C, na iru mmiri (ala kwesịrị ịdịtụ mmiri).
Mgbe ntuputa nke seedlings, na mgbakwunye na ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri, ìhè dị mma na-aghọ ihe dị oke mkpa. Họrọ ebe maka seedlings na window window nke ọma, mana nke mere na ọ dịghị akwụkwọ ntinye. Mgbe ụbọchị 2 gachara, ọ ga-adị mkpa ka ị wepụ ihe nkiri ahụ kwa ụbọchị (ruo 6-8 nkeji) ka mkpụrụ ghara ịcha. A na-eme ka iru mmiri nke ikuku dị n'ime iko ahụ kpebisie ike site na nsị iyi nke ihe nkiri ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị, mgbe ahụ, a na-asacha ala ahụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iji moisturize na ịdị mma ka ala ghara ịghọ ájá. Mgbe Ome pụtara (5-7 ụbọchị), ewepụrụ ihe nkiri ahụ.
Mgbe ị na-eke ọnọdụ dị mma (okpomọkụ, ala na ikuku ikuku, ọkụ), seedlings ga-apụta ngwa ngwa, ọ ga-abawanye na uto.
Ozugbo ihu igwe na-acha n'ehihie, i nwere ike ịmalite ịkpụ osisi ahụ. A ghaghị ime usoro ahụ n'emeghị ụbọchị. Mepee windo maka nkeji ole na ole, ịnwere ike ịmalite na nkeji ise. Chere maka ụbọchị na-esote ọsịsọ, megharịa nhazi ahụ, gbakwunye nkeji ole na ole, nọgide na otu ụzọ ahụ.
Chọpụta mgbe ọ kachasị mma ịkụ tomato n'ime oghe.
Ka oge na-aga, seedlings na-eru nha dị mkpa maka ịkụ n'ime ala, ala na ikuku emeela ka ọkụ dị ọkụ, ị ghaghịrịrị ịkwadebe akwa ahụ. Ala maka tomato kwesịrị ịkwadebe ebe ọ bụ na mgbụsị akwụkwọ. Iji mee nke a, ha na-egwu ala ebe akwa ahụ, wepụ ata na ifatila ha:
humus - 4l / 1 square. m;
superphosphate - 2 tbsp. spoons / 1 square. m;
potassium nnu - 1 tbsp. spoons / 1 square. m
Ọ bụrụ na ala dị acidic, a ghaghị itinye ha wayo - 0,5 n'arọ / 1 sq. m Na oge opupu ihe ubi, izu 2 tupu ịgha mkpụrụ, a na-eme ka ala dị ka nke a:
ịsa akwa na ngwọta nke ọkụkọ (kpalakwukwu) -awụba n'oké osimiri - 0,5 n'arọ / 1 square. m;
mmiri na a ngwọta nke sifted osisi uyi - 0.5 n'arọ / 1 square. m;
wunye ngwọta nke ammonium sulphate - 1 tbsp. ngaji / 1 square. m
Naanị oke nke nri a chọrọ maka nhazi 1 square. mita, ego mmiri nwere ike ịdị iche. Ọ bụrụ na ala dị ọcha, ọ ga-ezu 1 ịwụ kwa 1 square. m (maka ụdị fatịlaịza ọ bụla), ma ọ bụrụ na akọrọ, ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ nke ejiji na-agbaze n'ime nnukwu mmiri mmiri (1.5-2 bọket).
A na-ahazi ndina ndị ahụ dị ka atụmatụ ndị a:
ntinye ugbua - 0,5 m;
anya n'etiti bushes - 0.4 m;
njupụta - 3-4 ohia / 1 square. m;
ebe - chess order.
N'elu ala a kwadebere n'ala, ụbọchị 3 tupu akuku, a na-eme olulu mmiri dịka atụmatụ ahụ dị n'elu. Ohere ahụ kwesịrị ịbụ nke dị ka iko ma ọ bụ mgbọrọgwụ ya na ngwakọta nke mkpụrụ nwere ike daba n'ime ya, ma ọ bụrụ na ndị toro eto na-etolite na iko a na-eri.
Ị ma? Ruo ogologo oge, e wepụtara tomato dị ka osisi na-egbu egbu, dị ka poteto, nke South America bụkwa ebe a mụrụ ya. Colonel R.G. Johnson, bụ onye riri otu ịwụ tomato n'ime afọ 1820 n'ihu ụlọ ikpe dị na New Jersey, gbalịrị ịgbanwe àgwà nke ndị mmadụ na omenala a.
Awụsara olulu mmiri na mmiri na-esi ísì mmiri na mmiri permanganate (10 g / 1 ịwụ mmiri), wee jiri mmiri dị ọcha dị ọcha ma kpuchie ya na fim. A na-ewepụ ihe nkiri a ụbọchị tupu ọdịda.
Usoro nke ịkụ mkpụrụ osisi n'ime ala dị nnọọ mfe, ị ga-eji nlezianya wepu osisi ahụ na iko (ọ bụrụ na ị na-eji ihe mkpofu). A ghaghị ime nke a n'ụzọ dị otú ahụ na clod nke ala nọgidere na-emebi. Ọ bụrụ na ị na-eji iko peat, ọ dịghị mkpa ka ị wepụ ihe ọ bụla, kụọ osisi ahụ n'ime oghere ahụ. Iji kwado ọrụ a, ụbọchị tupu ị kụrụ mkpụrụ osisi ahụ n'ogige mmiri ahụ. Maka ọdịda, ọ ka mma ịhọrọ igwe ojii, mana ụbọchị na-enweghị isi.
A na-etinye osisi n'ime oghere ka olu nke usoro mgbọrọgwụ dị 2-3 cm n'elu elu nke oghere ahụ.
Gbalịa itinye ohia n'ime oghere ka mgbọrọgwụ ghara ịbanye n'ime omimi (ala ebe ahụ ka nwere ike ịdị jụụ), mana alaka ahụ na-apụta na mbara igwe;
Ịkwado osisi ohia n'akụkụ aka ya n'otu aka, nke ọzọ, jupụta oghere ya na ụwa, na-eme ka mpaghara ahụ gbanye mgbọrọgwụ oge.
Mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri. Ọ bụrụ na i mere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, mgbe ụbọchị 4-5 gasịrị, mgbọrọgwụ ahụ ga-enwe ike iji jide ma na-azụ ohia.
Vidio: Akuku tomato seedlings na ala oghe Tomato bụ ezigbo osisi na-ahụ maka mmiri. N'ihi nke a, ụfọdụ ndị na-eto eto na-ekwenye na ha kwesịrị ịṅụ mmiri mgbe ọ bụla o kwere omume. Nke a abụghị eziokwu niile, a ghaghị ịṅụ mmiri dịgasị iche iche dị ka ọ dị mkpa, mana n'ụba.
Kwesịrị ileba anya na steeti ala na mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na ala akọrọ (ọ ka mma ịghara iweli ya elu), ịṅụ mmiri dị mkpa. Ọ bụrụ na mmiri ruru eru, ọ ka mma ichere na ọgwụgwọ mmiri.
Ọ dị mkpa! N'ihe mere na seedlings gị eruolarị ọnọdụ dị mkpa maka ịkụ ihe na mbara ala, ala na ikuku adịghịkwa ahụ ọkụ, tinye ya na ebe dị jụụ ma belata ịgbara. N'ihi nke a, uto ga-eme ngwa, ma mgbe ọnọdụ dị mma, kụọ osisi ahụ n'ala. Ọ dịghị mkpa ịtụ egwu, usoro ahụ dị oke ize ndụ, na ọnọdụ nkịtị tomato ga-amalite na-eto ngwa ngwa.
Ná nkezi, na mmiri ozuzo zuru ezu, ọ dị mkpa ka a na-asa ya kwa izu. Ọ bụrụ na mmiri ozuzo dị obere, a na-eme usoro ahụ kwa ụbọchị 4. Ọ bụrụ na oge okpomọkụ bụ mmiri ozuzo, ruo ogologo oge ị nwere ike ime n'enweghị mmiri mmiri. Usoro mmiri maka tomato kwesịrị ịhazi ma ọ bụ n'isi ụtụtụ, ma ọ bụ n'ime awa tupu ọdịda anyanwụ (nhọrọ kacha mma). Maka ịgbara, ịkwesịrị iji otu ogige ubi na-edozi ma jide n'aka na ị ga-enwe mmiri ọkụ ma ọ bụ mmiri ozuzo. Ihe ngwọta kachasị mma ga-abụ ihe mgbapụta nke mmiri. Gbalịa ịṅụ mmiri na osisi dị otú ahụ na mmiri na-enweta naanị na mpaghara mgbọrọgwụ, na-ahapụghị mkpu na ala.
Ọ bụghị ihe ọjọọ maka usoro tomato na-emeju. Ọ na-agụnye ndị na-esonụ: n'akụkụ abụọ nke ihe ndina ahụ, n'ebe di anya nke 35-40 cm si ohia, a na-eme trenches ogologo, 30-35 cm n'obosara, na otu omimi. Mmiri ahụ jupụtara na mmiri ruo n'elu, mmiri ahụ, na-etinye aka n'ime ala, na-abanye n'ime usoro mgbọrọgwụ.
Eleghi anya ị ga-enwe mmasị ịmara ma ọ ga-ekwe omume ịmalite tomato ma ọ bụrụ na ị gụchaa.
Usoro a dị mma n'ihi na ala dị omimi ma jupụta na mmiri. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya itinye tupu osisi amalite ịmị mkpụrụ. Achịcha dị ntakịrị - 1 ịwụ / 1 ohia. Dejupụta ihe ndọtị ọ bụla ụbọchị 4-7, dabere na oke mmiri ozuzo.
Mgbe ọ bụla ọ bụla atọ kwesịrị ịtọghe ala n'etiti bushes, dị ka ọ na-ekpuchi na crust. Mgbe ị na-atọpụ, dịka ọ dị mkpa, a na-egbukwa akwa ahụ. A ghaghị ịtọghe izu atọ mbụ karịa 8-10 cm. Mgbe nke a gasịrị, a ghaghị belata ịdị omimi na-emeghe ruo 6-8 cm, ebe ọ bụ na n'oge usoro ahụ, a pụrụ imetụ usoro mgbọrọgwụ nke toro n'oge ahụ. Ala ala dị n'etiti ahịrị nwere ike ịtọpụtakwu ya.
Ị ma? Ka ọ dị ugbu a, e nwere ihe karịrị puku ala 10,000, iche na ụdị tomato. Ọnụ ọgụgụ kasị nta nke tomato tomato toro eto dịka 1.5 cm, ndị nnọchianya kachasị dị iche iche (nke gụnyere "Shuntuk ibu") rute 1.5 kilogram nke ibu. Akara agba, na mgbakwunye na acha uhie uhie na pink, na-agụnye ụdị odo na agba odo.
Echefula tomato tomato. Usoro agrotechnical a dị oke mkpa maka ihe ndị dị otú ahụ:
enyere aka na ala;
igwe kpochapu kpochapu nke ala n'ala mpaghara;
egbochi usoro mgbọrọgwụ iji ruo n'elu;
dị mma maka ezi ibu nke mgbọrọgwụ n'ime ụgbọ elu.
Oge mbụ spud tomato mgbe izu 3 nke ịkọ ihe ubi, usoro nke abụọ - n'otu oge ahụ. Masking bụ ngwá ọrụ agrotechnical dị mkpa, ihe bụ isi bụ ime ka mkpụrụ osisi ahụ dịkwuo elu. Ihe kachasị mkpa nke usoro bụ ịmepụta ohia site na iwepu akụkụ Ome. Ome ndị a anaghị amị mkpụrụ, mana osisi ahụ na-etinye ha nri na ya, kama inyefe ihe ndị a iji guzobe ọhụrụ ovaries, na, ya mere, mkpụrụ.
Ọ bụrụ na tomato adịghị pasynkovat, ha ga-arụ ọrụ nke ọma. Na sinuses guzobere usoro, nke a na-akpọ stepchildren. Iwepu Ome ndị a, anyị na-ahapụ nanị alaka ndị na-amị mkpụrụ. Iwu ndị bụ isi nke pinching:
Ozugbo nku mbụ ahụ gbawara, i kwesịrị iwepụ ya.
Akpa pin, gbajie ma ọ bụ dọkapụ, ha ekwesịghị ịkpụ.
Wepụ stepchildren ga-adị na oge, ruo mgbe ha ruru 4 cm.
Gwakọta ihe niile ndị nọ n'okpuru ụlọ ọrụ kachasị elu na ovaries. Na usoro nke dị n'elu alaka ụlọ ọrụ a, enwere ike ịhụ ovaries. Ha, n'echiche gị, nwere ike ịhapụ.
Usoro dị mkpa iji mepụta n'ụtụtụ.
Gbalịa izere ịkpọtụrụ aka na mmiri nke osisi na-ewepụ mgbe ị na-ewepụ stepsons. Ọ bụrụ na osisi ahụ na-arịa ọrịa na ihe, ihe ọṅụṅụ ya nwere ike ịbụ onye na-ebu ọrịa ahụ na osisi ahụ ike. Tinyere nchapu, wepu akwukwo nile nke di na ala. Ngwurugwu ahụ, na alaka ndị dị ala na ovaries, kwesịrị ikpuchi, na-ejikarị eme ka ọ dị mma, na ịnweta ikuku dị mma.
Ọ dị mkpa! Akwụkwọ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egosi ezughị mmiri.
A na-eme nkedo ikpeazụ na pinching okpueze dị ka 1-2 izu tupu ọgwụgwụ oge okpomọkụ. Nzọkọta kacha elu ka ohia wee ghara ịbawanye.
Ihe di iche iche ajuju nke "Shuntuk ibu" bu, kwesiri ka ha buru ihe. Ọ bụrụ na emetụbeghị Ome ahụ, ohia na-etowanye elu ma na-arịgo elu. Ọnọdụ a bụ ihe na-egbochi ịmepụta mkpụrụ buru ibu.
Enwere ọtụtụ atụmatụ ntụtụ (na 1, 2 ma ọ bụ 3 stalks). Maka "Shuntuk ibu", otu ọka nke 1 otu adịghị adaba, dịka atụmatụ dị otú ahụ, ohia siri ike, ọ bụ ezie na a ga-amị mkpụrụ buru ibu.
Dị ka ọtụtụ ubi a kụrụ n'ubi, tomato, ọbụna ndị kachasị eguzogide ọrịa, ka nwere ike ịdaba na ọrịa ụfọdụ na pests. Okwu ole na ole gbasara ndị kachasị.
Colorado ebe. Ikekwe onye iro kasị njọ nke tomato, na-azụ na akwụkwọ na ovaries. N'ime osisi ọgwụ ndị a na-eji emebi nje a, anyị nwere ike ịmata ihe ndị a: Bombardier, Typhoon, na ndị ọzọ ndị na-arụ ọrụ na-emidacloprid na glyphosate. Tinye ọgwụ ọjọọ, soro ntuziaka. Ekwesiri ikwu banyere ụzọ ndị na-enweghị ihe mgbakwunye ọgwụ chemical: a na-atụgharị osisi ndị ahụ na nsị nke wormwood, osisi ash. N'oge okooko, fesaa na sifted birch uyi.
Ọ dị mkpa! "Shuntuk ibu" ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% na-eguzogide ọgwụ na tlu na slugs, na-eguzogide ọrịa dị iche iche.
Medvedka. A na-ahụkarị parasaiti a n'ala na akwa iru mmiri na nnukwu ọdịnaya nke nri. N'ụzọ doro anya, ụmụ ahụhụ ma tozuru okè na ọdịdị ha dị ize ndụ. Site na-agbawa na amaokwu na ala na akwa akwa tomato, nje na-ebibi usoro mgbọrọgwụ, si otú ahụ gbochie osisi site na-emepe emepe. Dichaa ụmụ ahụhụ nwere imidacloprid (Confidor) na diazinon (Medvetoks). Omume nke Medvetokas, na mgbakwunye na toxin dị na ya, dabere na mma nke ahụhụ na isi. Jiri nlezianya gụọ ntuziaka ma mee ihe kwekọrọ na ya.
Ọzọkwa, echefula banyere agrotechnical usoro:
belata nri umu;
na-ewepu oge aisles na ohere n'etiti bushes.
Site na ọgwụgwọ ndị mmadụ, ọ dị mkpa ịkọwa ihe akuku nke okooko osisi-na-agbapụta gburugburu akwa, isi nke ndị na-ere anụ ọkụkụ na-agụnye ọ bụghị naanị anụ ọhịa bea, kamakwa ihe ndị ọzọ na-akpata ọrịa.
Scoop na tomato. Akpata kpuru, ma mechaa ntu nru ububa ahụ, na-ebibi osisi ovaries. Atụmatụ ụfọdụ gbasara otu esi ebibi nje ahụ:
na-agba ọgwụ ọjọọ Lepidocide kwa ụbọchị asaa;
Detsis dị nnọọ irè n'ọgụ a na-ebuso ụmụ akwụkwọ scoop.
ịgha ahịhịa nke ahịhịa na-agba mgbe niile;
kwa ụbọchị 10 ọ na-atụ aro ka a fesaa tomato na tincture nke akụ nke garlic;
na-egbu nri na ụtaba na wormwood.
Site na ọrịa nke tomato ọ bara uru ikwu okwu ole na ole maka ndị a:
White spotting. A na-amata ọrịa a site na ogho uhie na epupụta, nke na-emecha kpoo ma daa. Ke akpa akara, na bushes kwesịrị sprayed na 0.1% ngwọta nke Bordeaux ngwakọta.
Ọ dị mkpa! Ngwurugwu ndị na-eri anụ, pathogens nke Ramulariasis (ntụpọ ọcha), oyi na ọdịda epupụta emetụta ha. Ya mere, iji zere ọrịa ahụ na-esote oge ọzọ, a ghaghị iji nlezianya nakọtara akwụkwọ ọkụ niile ma kpọọ ya ọkụ.
Brown spotting (phyllosticosis). N'elu ala dị n'elu site na-acha uhie uhie, n'akụkụ dị n'akụkụ - agba nke ntụpọ bụ greenish. Ọ bụrụ na a naghị agwọ ọrịa ahụ, akwụkwọ ahụ daa. Spraying ọla kọpa sulphate (1% ngwọta) na-eji maka ọgwụgwọ.
Mgbe ị na-amalite owuwe ihe ubi, dabere na mpaghara a kapịrị ọnụ nke ịkọ ihe. Na Moldova, Ukraine, n'ebe ndịda nke Russia na tomato na-emeghe ka ọ dị na mbubreyo July-mmalite August. N'etiti Russia, na Belarus - izu isii ka e mesịrị.
Na-anakọta mkpụrụ osisi mgbe ha erubeghị ntozu okè. Ebumnuche dị otú ahụ maka ntọhapụ nke ihe ọkụkụ: ọ gaghị enye ike n'ozuzu nke nwa ebu n'afọ (nke ga-edozi n'onwe ya), mana ọ ga - etolite ọhụrụ ovaries. Ozugbo ị chọpụtara na osisi ahụ malitere "ịda n'ụra" (ihe a na-adaba na ọnụ ọgụgụ dị elu), ọ dị mkpa iji ihe ubi ahụ kụrụ. Mgbe ikuku ikuku nke ehihie na-anọ na 6-8 Celsius, mgbe ahụ, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya ịdebe mkpụrụ osisi bushes, ha agaghị 'eru'.
Chọpụta ihe kpatara na ị gaghị echekwa tomato n'ime friji.
Ọ bụrụ na enwee mmetụta nke ntu oyi, ma a ka na-eme ka bushes ndị ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, a ga-ewere usoro ndị a:
A na-egwu olulu ya na mgbọrọgwụ ma dina na ricks ruo elu 1 m, n'elu n'ime otu ntụziaka.
A na-ekpuchi mpi na ahihia na aka ekpe maka 1.5-2 izu. Mgbe oge a kara aka, a na-ekpokọta mkpụrụ tomato chara acha, ire ere na ịgha mkpụrụ osisi.
Na mgbe niile, ọ bụla 2-3 ụbọchị, ihe ubi, ruo mgbe tomato niile na-acha.
Ọ bụghị ihe ọjọọ n'ụzọ dị otú a nke ripening:
Ghọta mkpụrụ osisi ndụ ndụ ọ bụla fọdụrụnụ.
Debe ihe nkiri ubi na ala nke griin ha, tinye ihe nkuku di na ya, kpuchie ya na ahihia.
Debe igwe okpomọkụ na griin ha na 17-22 Celsius C, na nkezi iru mmiri nke 75-80%.
Ka ha na-eme ihe owuwe ihe ubi, wepụ mmebi na ire ere.
Ị ma? Ihe karịrị 94% nke tomato bụ mmiri, 100 g tomato naanị calorie 22, ya mere ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe dị mma maka ọnwụ.
"Shuntuk ibu" na-eme ka aha ya doo anya, na-atọ ndị na-elekọta ubi ụtọ nke nwere mkpụrụ buru ibu na nlekọta na-adịghị mma. Otutu ndi oru ugbo amu amu ndi gbaliri ime ka ndi dike a buru ndi na-eguzosi ike n'ihe. Gbalịa ịkụ mkpụrụ dị iche iche n'ubi gị, ọ ga-ekwe omume na ị ga-esonyere "ndị Shuntuk" nke ọma.